July 21, 2019 - CeleLove
July 21, 2019 Cele Love 0
သင်မသိသေးတဲ့ ငှက်ပျောခွံနဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းများ… ငှက်ပျောသီးစားပြီး ငှက်ပျောခွံကို လွှင့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့နော်။ ငှက်ပျောခွံက သင့်အလှအပအတွက် များစွာအသုံးဝင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောခွံနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်မသိသေးတဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ (1) သွားများဖြူဝင်းစေဖို့ ငှက်ပျောခွံဟာ သွားတွေကို ဖြူဖွေးစေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ညစ်ညမ်းနေတဲ့ သွားတွေအတွက် ငှက်ပျောခွံကို သုံးဖို့သတိရလိုက်ပါ။ […]
မပူမပင် မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာနေနိုင်မယ် ဗုဒ္ဓယတြာ
မပူမပင် မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာနေနိုင်မယ် ဗုဒ္ဓယတြာ နံနက် အိပ်ယာထချိန်တွင် မိမိတို့အိမ်တွင် ရှိသောမြတ်စွာဘုရားကိုမျက်နှာသစ်တော်ရေ၊သောက်တော်ရေချမ်းကပ်ပါ …. ။ မျက်နှာသစ်တော်ရေနှင့် သောက်တော်ရေချမ်း ကပ်လှူသောအခါ ဘဒ္ဒကမ္ဘာတွင် ပွင့်တော်မူသော သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားကို ဘုရားတပည့်တော်၊ တပည့်တော်မသည် မျက်နှာသစ်တော်ရေနှင့်သောက်တော်ရေချမ်းကို သဒ္ဒါကြည်ဖြူစွာ နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်း လှူဒါန်းပါသည် အရှင်မြတ်ဘုရား …. ။ […]
မာစတာရှက်ဖ် ပြိုင်ပွဲကို အကွက်ကျကျ ထောက်ပြ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ စားဖိုမှူးကြီး တစ်ဦး
မာစတာရှက်ဖ် ပြိုင်ပွဲကို အကွက်ကျကျ ထောက်ပြ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ စားဖိုမှူးကြီး တစ်ဦး အခု လက်ရှိ ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲ နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး လတ်တလော ဂယက်က ထလာပြန်သလို messenger ကနေလည်း မိတ်ဆွေတွေ ရော တပည့်တွေက ပါ တစ်ခုခုရေးစေချင်လို့ link နဲ့တကွ ပို့ပြီး နေ့စဉ်နီးပါး […]